Avy nandona ankizivavikely…. : nitsoaka kanjo nifatratra tamina Sprinter ilay P. 405 | NewsMada
Avy nandona ankizivavikely…. : nitsoaka kanjo nifatratra tamina Sprinter ilay P. 405
Nikasa hitsoaka, rehefa avy nandona ankizivavikely, tao Lavarano, Vinaninkarena, Antsirabe II ity fiara P.405 iray, ny alin’ny asabotsy teo. Tsy lasa lavitra anefa fa nifatratra tamina taksiborosy Sprinter, avy eo.
Antony nahatonga ny loza ny tandrevaka teo amin’ny fiara P. 405 iray nandona ankizivavikely iray 15 taona tao amin’io toerana io. Nitsoaka avy hatrany ilay fiara nahavanon-doza ka nifatratra tamin’ny taksiborosy avy aty an-drenivohitra ho any atsimo tao amin’ny fiolahana iray antsoina hoe Lavarano vokatry ny fandehanana mafy teo amin’ilay fiara P. 405. Mafy ny fifandonana ka naratra mafy ireo olona ampolony (dimy tao amin’ilay P. 405 ary dimy tao amin’ilay taksiborosy). Isan’ireo naratra mafy koa ny mpamilin’ilay fiara P. 405 satria voa mafy teo amin’ny lohany izy. Nisy tamin’ireo mpandeha tamin’ilay taksiborosy no tapa-tanana sy tongotra sy voa mafy teo amin’ny tratrany noho ny dona mafy teo amin’ireo fiara nifandona. Tafapitika avy eny ambony fitoeran’entana ny entan’ny mpandeha rehetra tao amin’ilay taksiborosy.
Araka ny fanazavan’ny zandary misahana ny fisavana fiara amin’ny lalana RN 7 eo Vinaninkarena Antsirabe II, avy nandona ilay ankizivavikely avy niandry faty ity fiara P. 405 ity ka tsy nijanona fa nirifatra nandositra. Tonga nampandre ny zandary ny fianakavian’ilay ankizivavikely niharam-boina ka heno taorian’izay fa tra-doza tsy lavitra ny toerana nahavoadona ilay ankizikely ity fiara P. 405 ity. Tapaka ny tongotr’ilay ankizivavikely niharam-boina.
Mamo ny mpamilin’ilay fiara P. 405…
Naratra mafy ireo niharam-boina rehetra. Tsy vitan’izay fa mbola nivadibadika tany an-tanimbary manamorona ny RN 7 ity fiara namoa-doza ity.
Voalazan’ireo olona nahita ny zava-niseho teo Vinaninkarena fa nentin’ny tahotra ny mpamily ka vao mainka nampiakatra ny hafainganam-pandeha rehefa avy nandona ilay ankizikely kanjo izao tra-doza fanindroany izao indray. Nanamafy koa ny zandary fa nahenoana fofon-toaka tamin’ny mpamilin’ilay fiara nahatonga ny loza.
Nahitana fahasimbana ireo fiara roa nifandona. Potipotika ny lohan’ilay taksiborosy Sprinter, toy izany koa ny an’ilay fiara P. 405 latsaka tany an-tanimbary. Olona teo amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny loza no nifanome tanana tamin’ny famonjena ireo niharam-boina. Isan’ireo tena voa mafy ny mpamily satria nifampisokirana tao anaty fiara izy, raha ny fanazavana voaray hatrany. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny zandary momba ity lozam-piarakodia ity.
Tsy vao izao ny nahitana fiara mitsoaka toy izao rehefa avy mandona olona. Tahotra ny ho tratran’ny fitsaram-bahoaka dia mirifatra avy hatrany. Toy ilay fiara marika Hummer nandona olona tetsy Ambohimanarina. Lasa nitsoaka toy izao koa ilay fiara.